UGoogle ufikelela kwisivumelwano ne-CBS yokubonelela imixholo yayo kwi-intanethi | IPhone iindaba
Kwiminyaka yakutshanje, indlela esisebenzisa ngayo umabonwakude itshintshile. Ngaphezulu nangakumbi amajelo ayafumaneka kuthi, kodwa kubasebenzisi abaninzi inkqubo abasinika yona ayonelanga kwaye bakhethe ukusebenzisa iinkonzo zokuhambisa ividiyo ezinje ngeNetflix, Hulu, HBO ... inkulu kwaye inkulu. Ukongeza, iinkonzo zekhebula okanye zethelevishini ziya zibiza kakhulu kwaye abasebenzisi bacinga malunga nokugcina inkonzo okanye bayirhoxise. Ukuzama ukufikelela kubo bonke abasebenzisi abangenamdla wokuqhubeka nokuhlawula olu hlobo lwenkonzo UGoogle kunye ne-CBS badibene kubo bonke abo basebenzisi abangafuniyo ukuhlawula amajelo ekhebula kwaye bafuna ezinye iindlela ezingabizi kakhulu.
I-CBS ifikelele kwisivumelwano noGoogle ukuba bonelela ngenkonzo entsha kumabonakude kwiqonga likaYouTube oko kuyakubona ukukhanya kunyaka olandelayo. Ngoku ka Ijenali yeWall Street, uGoogle naye uzama ukufikelela kwizivumelwano noFox, 21 Cenetry Fox kunye noWalt Disney. I-CBS ifuna ukuyeka ukuxhomekeka kwisathelayithi okanye uqhagamshelo lwentambo ukuze uluntu lukonwabele iinkqubo zalo kwaye kulapho umanyano lwayo noGoogle kunye nenkonzo yalo entsha yokuhlawula i-YouTube Red ingena.
Okwangoku i-United States lelinye lamazwe apho kunyanzelekile ukuba ube nonxibelelwano ngesathelayithi okanye intambo ukuze ukwazi ukonwabela iintlobo ezahlukeneyo zemijelo, kodwa ezi zinto zidibeneyo ziya zibiza kakhulu, nto leyo ekhuthaza ababoneleli abaphambili bolu hlobo lwamajelo ukuba babone ukuba banababhalisi abambalwa nabambalwa. Ukongeza, ukuhambisa iinkonzo zevidiyo akuncedi kakhulu, kuba ziyasivumela ukuba sonwabele uthotho lwethu kunye neemovie esizithandayo nanini na naphi na apho sifuna khona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » UGoogle ufikelela kwisivumelwano ne-CBS ukubonelela ngesiqulatho sayo kwi-intanethi